Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Gris | Njem zuru oke
Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Gris
Hellenic Republic nwere ebe square kilomita 132.000. Oké osimiri dị nnọọ na Greece na n’akụkụ mmiri gbatịrị kilomita 15.000. Atọ n'ime ụzọ atọ nke ókèala Grik kpuchiri ugwu. Obodo a nwere puku agwaetiti abụọ nke mmadụ 154 bi na ya. Ọtụtụ agwaetiti gbasasịrị na Aegean Sea, Ionian Sea na Mediterranean.
N'ime usoro ochichi nke GreeceIji hoputara onye isi ala nke ndi Republic, onye ndoro-ndoro agha aghaghi inwe osobo 180 site na ndi nnọchi anya 300 nke nzuko omebe iwu Greek. Na nzuko omeiwu Grik Ndị mejupụtara ya bụ ndị nnọchi anya 300 ahọpụtara maka afọ 4 site n'aka ndị Gris site na ntuli aka zuru ụwa ọnụ. Ka otu pati nwee ike ịchị, ọ ga-enwerịrị ihe karịrị oche otu narị na iri ise na ọgbakọ omebe iwu.
Enweghị otu ọ bụla ruru ha, ndị otu onye nwetagoro votu kachasị elu nwere ụbọchị atọ ịgakwuru pati ọzọ wee rute n'oche 150 ahụ. Ọ bụrụ na ha enwetaghị ha n'oge akara aka, ọ bụ nke abụọ a họpụtara ma ọ bụrụ na ha nwetara nkwekọrịta site na nkwekọrịta ahụ oche dị mkpa.
El mmalite ozi a hoputara ya dika onye isi nke otu ndoro-ndoro ochichi nke gha enweta otutu oche na nzuko omeiwu.
na ntuli aka a na-eme ha ncheta kwa afọ anọ. Iji votu, nwa amaala Gris ọ bụla gbara afọ iri na asatọ ruo Jenụwarị 4 nke afọ dị ugbu a. Iji maa atụ, ọ bụrụ nhoputa ndi ochichi na-eme na Maachị 18, 1, ndị ritere ọtụtụ rue Jenụwarị 7, 2004 nwere ike ịme ntuli aka. ịtụ vootu bụ iwu, na nwa amaala nke na-adịghị arụzu ọrụ ya nwere ike ikpe ikpe ziri ezi.
La jornada electoral Ọ na-ebido site n'isi ụtụtụ ruo mgbede, na onye ọ bụla na-agbata obi na agbata obi ha na ebe akọwapụtara, ụlọ akwụkwọ, Halllọ Nzukọ Obodo, na ihe ndị ọzọ.
Ndi votu a bu nhoputa, kamakwa aha. N'ime ndoro ndoro ochichi obula, edeputara ndi nile choro ime ma ndi nhoputa aka nwere ike igosi ndi ha choro ka ha hoputara ma obu tinye ya edeputa na envelopu ntuli aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Gris
Iji tagzi na-agagharị na Shanghai, otu ọ dị na ego ole ọ na-efu